Ukuthuthukiswa kokuqukethwe kwe-SEO: Yiziphi Izindlela Ezinhle Owaziwa Ngayo?
Kungenzeka ukuthi usuvele wezwa ukuthi kubaluleke kangakanani ukukhiqiza okuqukethwe okufanele futhi okuwusizo njalo. Kodwa-ke, ukuthuthukisa okuqukethwe okusha nokubandakanya, kube yizihloko, ukuthunyelwe kwebhulogi, amaphepha amhlophe noma ucwaningo lwamacala, ingxenye nje yempi. Esinye isigamu sithola lokho okuqukethwe phambi kwezethameli ezilungile.
Esihlokweni samanje, ngizokwethula zonke izimfihlo zokuletha okuqukethwe kwakho kubantu abalungile ngesikhathi esifanele. Ngakho-ke, ake siqale.
Izindlela ezihamba phambili ze-SEO zokukhuthaza okuqukethwe kwakho ngemuva kwesikhathi
Okwenza izinjini zokusesha zikhulu kakhulu ukuthi bazoqhubeka bekhanga abasebenzisi abasha ngemva kwesikhathi eside uyeke ukukhuthaza okuqukethwe. Kuye kwafakazelwa ukuthi ngaphezu kokulondoloza okuqukethwe kwakho okufanele futhi okuhlanzekile, izinjini zingasisiza futhi ibhizinisi lakho ngokuheha izithameli ezintsha kanye nokwandisa ukwaziswa komkhiqizo wakho.
Uma ufuna ukusebenzisa okungcono isu se-SEO esakhelwe kahle, ungabambelela kangcono emisebenzini ye-SEO ehlelwe ngezansi. Nakhu okulandelayo:
Igama eliyisisekelo Igama lokuqala
Omunye wemikhuba ye-SEO engcono kakhulu ongayenza ukuze uthuthukise okuqukethwe kwakho ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa amagama angukhiye okubhekiselwe kuwo wonke okuqukethwe kwakho kwisayithi. Qinisekisa ukuthi ufake imishwana ebalulekile ngokwemvelo njengengxenye yekhophi yakho. Lokhu kuyadingeka ukuze ugweme ukugxilisa igama elingukhiye.
Ukunquma amagama angukhiye angakusiza azosiza ibhizinisi lakho emiphumeleni yokusesha udinga ukukhomba nokubeka kuqala izinto ezibaluleke kakhulu ebhizinisini lakho kuqala. Qala ngokuthuthukisa uhlu lwamagama angukhiye ahlobene nebhizinisi lakho. Bese ubeka phambili phambili lawo magama angukhiye ngokusekelwe ezicini ezilandelayo:
Wenze lokho? Kwakuhle kuwe. Hambisa isinyathelo esilandelayo.
Ukukhishwa kwamathegi we-Header
Isinyathelo sesibili ngokuphathelene nokuthuthukisa amathegi ekhanda webhusayithi yakho. Khumbula, uma kuziwa kwikhophi yewebhu, ukuthi uhlela kanjani futhi uhlele izindaba zakho zokuqukethwe okuningi. Amathegi aH1- H6 ahlelwe kahle azisiza i-Google ukuthi iqonde kangcono okushiwo yendaba yakho. Futhi, ungakhohlwa ukubeka amagama angukhiye ezihlokweni zakho ukuze uthole imiphumela engcono ye-SEO.
Engeza ezinye izixhumanisi
kokubili: izixhumanisi zangaphandle nezingaphakathi zihlinzeka nge-SEO value. Lapho udala isihloko esisha noma ushicilela okuthunyelwe kwebhulogi, cabanga ngokungeza izixhumanisi kwezinye izinto ozidalile ngaphambilini - uma kunengqondo futhi uzizwa engokwemvelo. Njengoba ungeza izixhumanisi zangaphakathi, qiniseka ukuthi ikhasi lewebhu oxhumanisa nalo liwusizo kumsebenzisi. Futhi, qiniseka ukusebenzisa izixhumanisi ezilandelayo.
Labo abanikazi bewebhu abenza ibhizinisi emazweni amaningana kufanele bahlele okuqukethwe kwabo. Lokhu kuyadingeka ukukhulisa imizamo yakho ye-SEO ezindaweni ezihlukahlukene. Ukutholakala kokuqukethwe akuwona umsebenzi onzima nhlobo. Nakhu okungadingeka:
Ukuhumusha ikhophi ezilimini eziningi;
Ukwenza ezinye izibuyekezo zesipelingi;
Ukucabangela ukungezwani kwamagama wesizinda nezinombolo zocingo.
Nakuba lezi zici zingase zibonakala zifana ne-fuzz, zidlala indima ebalulekile ekusakazeni okuqukethwe kwakho kuzilaleli ezifanele.
Ngethemba ukuthi ujabulele imikhuba ye-SEO ngenhla yokuthuthukiswa kokuqukethwe Source .